Qoys gurigooda ku xanaaneeya Duur-joogta ugaarsiga ku dhiban. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka August 27, 2017	0 278 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Xarunta Animal Ark waa goob gaar loogu xanaaneeyo duur-joogta Maharashtra ee dalka Hindiya taas oo qaabisha xayawaannada aqoontoobay lana ugaarsaday waalidiintii dhalay. Waxaa dhisay mid kamid ah dhaqaatiirta xaafadda kaas oo fahmay lagama haraanka ugaarsiga, hayeeshe aan haddana oggolaanin in ilmaha yar ay macluul iyo agoonnimo u dhintaan.
Previous: Dhanbaal: Mudane Ra’iisul-wasaare – hiigsiga Himiladeenna, Hal arrin baa ka dhiman!!
Next: Xaafadda ugu nadiifka badan Qaaradda Aasiya.
Muslimad loo diiday inay ka qeyb-gasho Tartanka maadaama ay xiran tahay Xijaab!